निजी घरमा पानी आपूर्ति - यो अक्सर वस्तुतः सबै homeowners द्वारा सामना कि समस्या छ। कसैले ड्रिलिंग वेल्स मा लगे कम्पनी सम्पर्क गरेर solves, र केही प्रशंसक वेल्स digging छन्। कुनै पनि मामला मा यो कार्य पंपों सधैं सामना देखि, प्रणाली मा दबाव को स्थिरीकरण को समस्या समाधान गर्न आवश्यक छ।
सामान्यतया, यो थप सामान्यतः झिल्ली रूपमा परिचित छन् जो, पानी आपूर्ति लागि हाइड्रोलिक Accumulators सेट विस्तार ट्यांक। तिनीहरूले मात्र सिस्टम मा एक स्थिर दबाव कायम गर्न सेवा, तर पनि जगेडा को भूमिका खेल्छन्। यो विशेष गरी छैन जहाँ पानी पानी को कमी साधारण बाहिर केहि ग्रामीण क्षेत्रमा, साँचो हो।
झिल्ली ट्यांक को मुख्य कार्य
कुनै पनि पछि प्रश्नहरू रोक्न क्रममा, बस सबै आधारभूत कार्यहरु को विस्तार ट्यांक घरमा स्थापित गर्नुपर्छ जसको लागि बताउन पानी आपूर्ति प्रणाली :
पानी आपूर्ति गर्न जोडिएको उपकरण, पुऱ्याउने पानी हथौडा रोक्न;
हामी भने छ रूपमा, तिनीहरूले पिउने पानी एकदम पर्याप्त मार्जिन राखिएको गर्न सकिन्छ;
एकदम ट्याप छोटकरीमा खुलेको छ भने पनि समावेश अब आवश्यक जो पम्प, सेवा जीवन बढ्छ।
त्यसैले के ठीक accumulator घरमा पानी आपूर्ति को पूर्ण स्वचालन सक्षम बनाउँछ। उदाहरणका लागि, उसलाई मात्र पंप रिले लागि सेट गर्न सकिन्छ। यदि कुनै डायफ्राम ट्यांक, प्रणाली नियमित उतार चढाव प्रदर्शन तरल पदार्थ दबाब। यो प्रणाली यसका द्रुत बाहिर निस्कन साथ fraught छ जो एक स्थिर बिजुली ट्रिपिंग रिले, गर्न जान्छ।
प्रणाली मा तरल पदार्थ दबाव केही जानकारी
कृपया पानी सङ्कुचन गर्न वस्तुतः असम्भव छ भनेर सजग हुन। प्रणाली एक रिले छ, तर त्यहाँ पानी को लागि कुनै हाइड्रोलिक Accumulators छन् भने, त्यसपछि जब तपाईं पम्प दबाव सक्रिय मा बढ्छ। तदनुसार, तपाईं यसलाई critically पतन ट्याप खोल्न गर्दा जबरजस्ती पंप, खपत पानी मात्रा अत्यन्तै सानो छ भने पनि पुन क्रियाशीलता।
यो घटना व्याख्या गर्न हामीलाई उच्च विद्यालय भौतिक सम्झना गरौं। यो पानी सङ्कुचन अनुपात 5x10 ^ जनवरी 10 / प छ कि ज्ञात छ। यसरी, दबाव मा वृद्धि वा कमी तरल को वास्तविक मात्रा मा लगभग कुनै प्रभाव छ। फलस्वरूप, सञ्चालनको यो मोडमा रिले टिक्नेछैन छैन, र एक बिजुली पंप चाँडै असफल हुनेछ।
हामी खातामा पानी खपत को peculiarities लिन
यो स्पष्ट छ कि बुझ्न महत्त्वपूर्ण छ डायफ्राम ट्यांक तपाईं आफैलाई यो पम्प लागि केवल जिम्मेवार छ रूपमा, राम्रो तरिकाले पानी पंप छैन! यो पानी को एक निश्चित रकम भण्डारण र ट्याप गर्नुहोस् खोल्ने समयमा यसको दबाव परिवर्तनहरू क्षतिपूर्ति गर्न मात्र गर्दछ।
धेरै विनम्र छैन, जोडी घर बाथरूम मा पानी चयन गर्न को लागि हाइड्रोलिक Accumulators कस्तो, उपलब्धता विषय बारे यति सोध्न। ध्यान दिएर यो सबै छ पढ्न भने, तपाईं क्षण मा पम्प आपूर्ति जल उहाँले थियो कि जब अनुमान गर्न सक्छ! यस मामला मा ट्यांक बिल्कुल कुनै मूल्य प्ले गर्दैन।
यो पनि रिले मा सम्भव असफलता सजग हुन लायक छ, पम्प हुँदा पनि मान्छे पानी प्रयोग एक समयमा बन्द हुन सक्छ। यो रिले malfunctions वा पम्प को गलत विकल्प बारे कुरा गर्न सक्नुहुन्छ। पानी को लागि कुनै पनि मामला मा, यो अफसेट छ Accumulators यो समयमा उत्पन्न कि तरल पदार्थ दबाव मा रुकावट छन्।
उपकरण र सञ्चालनको सिद्धान्त
यी उपकरणहरू गल्ति आफ्नो गुहा पानी र हावा संग, दुई स्वतन्त्र भागमा विभाजित गरिएको छ किनकी, झिल्ली विस्तार ट्यांक भनिन्छ छैन, र प्रत्येक अन्य देखि, तिनीहरू केवल एउटै झिल्ली विभाजित छन्। को accumulator को के काम यति आधारित?
जब पानी ट्यांक मा पम्प्ड छ, यो एक विपरीत गुहा मा हावा compresses। यो अवस्था, P1V1 = P2V2 रूपमा उल्लेख छ संतुलन संकेत। रिले पंप काम गरिरहेको छैन, बन्द गरिएको छ। तथापि, उत्तरार्द्ध सम्पूर्ण जो सञ्चालनको फरक मोड लागि प्रोग्राम गर्न सकिन्छ पंप को सेटिङ, मा निर्भर गर्दछ।
पानी खर्च गर्न सुरु गर्दा हावा कोठामा, ट्यांक बाहिर तरल जबरजस्ती विस्तार। यस मामला मा दबाव यो धेरै बिस्तारै घट्छ, र एक निश्चित मूल्य पुगन पछि पम्प सरेका छ। तपाईं देख्न सक्नुहुन्छ रूपमा, सञ्चालन सिद्धान्त सरल र तार्किक छ।
एक हावा दबाव कुरा
हामी अझै पनि आवश्यक संग व्यवहार गर्नुभयो छैन हावा दबाव मात्र तरल को बोल, सम्बन्धित ट्यांक कोठामा मा। यस मामला मा एक नियम सरल छ: यसको मूल्य पंप लागि त्यो भन्दा ठीक 1/10 ठूलो हुनुपर्छ। तपाईं सम्झना गर्न सक्छन्, प्रयोगकर्ता आफ्नै नियन्त्रण गर्दछ।
महत्वपूर्ण! मात्र पानी आपूर्ति विच्छेद भएको एक सिस्टम हुन सक्छ accumulator मा दबाव मापन गर्न। अन्यथा, परिणाम गलत हुनेछ। यो एकदम भण्डारण ट्यांक को सेवा जीवन विस्तार गर्न सक्नुहुन्छ हामी, कडा सिफारिस यो आंकडा गर्न थप नियमित अनुगमन गर्न सक्नुहुन्छ।
यसबाहेक, यो 10% को फरक कायम गर्न सुझाव छ। सबै को सबै भन्दा राम्रो, मा स्विच बीच र पंप को बन्द दबाव फरक हुँदा 1.0-1.5 एटीएम भन्दा बढी छैन। यो उच्च हो भने, झिल्ली धेरै फैलयो छ। यो मात्र होइन तिनीहरू एक लामो समय को लागि मा सरेका गरिनेछ रूपमा, सेवा जीवन एकदम कम गर्छ, तर पनि रिले वा पम्प को पहिले विफलता गर्न सक्छ। साथै, फैलयो झिल्ली कि पानी हथौडा धेरै वास्तविक खतरा हुन्छ त, दबाव मा फरक neutralize गर्न सक्षम हुने छैन।
जहाँ स्थापना गर्न?
व्यावसायिक बिल्डर्स मात्र हो कि बाढी झुकाउ छैन क्षेत्रहरु, सीमा मान छैन भन्दा बढी गर्छ जो चिस्यान मा ट्यांक माउन्ट सुझाव दिन्छौं। निरंतर उच्च चिस्यान उपकरणको सतह मा हावा सामग्री condensate जम्मा गर्ने भन्ने तथ्यलाई। धातु पर्खालहरु को जंग - यो रंग को पहिलो तह, र त्यसपछि नष्ट हुनेछ।
ट्यांक कुनै गम्भीर दबाब वर्तमान छैन भएकोले बाहेक यो तलामा माउन्ट वा पर्खाल आवश्यक छैन। सामान्यतया, यो बस भुइँमा, एक विश्वसनीय समर्थन बीम वा ठोस पटिया प्रयोग सेट गरिएको छ।
छनौट गर्दा के हेर्न?
यो झिल्ली भण्डारण ट्यांक को खरीद यसको निर्माता नजिक ध्यान गर्नुपर्छ भनेर उल्लेख गर्नुपर्छ। दबाब accumulator, मूल्य जो प्रति 20 लिटर 1,000 भन्दा कम rubles, शायद चीन बनेको छ भन्ने तथ्यलाई। बारेमा एक उत्पादन रूपमा आफूलाई कल्पना गर्न सक्नुहुन्छ। खुसीको कुरा, हाम्रो उद्योग अझै पनि यस्ता उपकरण को समायोजित जारी छ। विशेष मा, उपनगर मा स्थित कम्पनी "JEELEX", उत्कृष्ट र सस्तो भण्डारण ट्यांकी उत्पादन गर्छ।
एक ट्यांक छनौट, को झिल्ली सामाग्री, साथै पानी पिउने को संरक्षण को लागि यो उपकरण को उपयुक्ततामाथि पुष्टि जो प्रमाणपत्रहरू, को उपलब्धता सिक्न पक्का हुन! यो एक टूटने को घटना मा एक नयाँ भण्डारण ट्यांक लागि पसलमा चल्दैन भनेर, उपलब्धता र स्पेयर पार्ट्स को उपलब्धता जाँच गर्न उपयोगी छ।
यो कति साँच्चै पानी छ?
अक्सर मानिसहरू अंकन "accumulator 100" एक सय लिटर को क्षमता संकेत ठान्छन्। यो साँच्चै हो? Alas, तर वास्तविक मात्रा दबाब स्विच को सेटिङ निर्भर (तर ध्यान दिएर पाठकहरूलाई आफूलाई यो बुझे छ)। को सुरु र पंप रोक बीच दबाव मा फरक उच्च, अधिक पानी सम्बन्धित कोठामा प्रवेश गर्नेछ। हामी तपाईंले पहिले नै सीमा राख्न सक्छ किन बारे लिखित छ हुनत।
यसरी, 50 लिटर लागि ट्यांक मा, दबाव एकाइहरु आधारमा (निर्माता द्वारा अनुमति) पानी 15 24 लिटर देखि दायरामा सक्छ! तसर्थ, पम्प वा केन्द्रीय पानी आपूर्ति को इनकार को घटना मा पीने वा प्रक्रिया पानी साँच्चै सभ्य स्रोत परेर, तपाईं ध्यान 300 लिटर को मोडेल तिर्न गर्नुपर्छ।
सिफारिस गरिएका सेटिङहरू
पूर्वोक्त Notwithstanding, सामान्य परिवारमा प्रयोगको लागि, हामी 35 लिटर भन्दा बढी छैन भोल्युम जो को मोडेल, सिफारिस हुनेछ। सामान्य मा, लगभग सबै अवस्थामा मा, accumulator-50 साथै ब्लक परिवारको आवश्यकता 4-5 मान्छे को।
यसलाई आफ्नो क्षेत्रमा धेरै साधारण छ जब ठूलो क्षमता ट्यांक मात्र किनेको हुनुपर्छ शक्ति आउटएज। को पाठ्यक्रम पनि मनमोहक ठूलो मात्रा भण्डारण ट्यांक, रूपमा अन्यथा एक शक्तिशाली उपकरण बारम्बार एक शक्ति आपूर्ति संग / बन्द चक्र 1.3 किलोवाट पंप मा आगो गर्न सक्नुहुन्छ।
को झिल्ली ट्यांक भण्डारण गरिएका पानी, चाँडै उपभोक्ता गुणहरू गुमाउनु भनेर याद गर्नुहोस्। जो माथि झिल्ली बनाउन सुरक्षित सामाग्री, तापनि तरल एक अप्रिय गन्ध र रंग, यो असम्भव खाना लागि यसलाई प्रयोग बनाउँछ जो प्राप्त गर्न थाल्छ।
साथै, रूपमा लिक तपाईं ठूलो समस्या हुनेछ गर्दा एक पेशेवर द्वारा एक उच्च क्षमता accumulator जडान प्रदर्शन हुनुपर्छ।
ताप स्थापना गर्नुहोस्। बयलर संयुक्त: लाभ र बेफाइदा
एक निजी घरमा पानी शुद्धीकरण सिस्टम: विशेषताहरू, निर्दिष्टीकरण, दृश्य र समीक्षा
एक एक्रिलिक वा पानी-तितरबितर रंग कसरी छनौट गर्न
सुझाव र चाल: कसरी घर gouache कपाल रंग गर्न
Homogeneous predicate के हो, र वाक्य यसको भूमिका के हो
स्क्वाड र अन्डाको साथ सलाद र न केवल ...